ဧရာဝတီစာကြည့်တိုက်: October 2011
ငွေရှာတာ သိမ်းဆည်းဖို့ မဟုတ်ဘူး။
ပေးကမ်းဖို့ရှာတ ဆိုတဲ့ ဖေဖေ့ စကားကို
၀မ်းသာပါတယ် ကွယ်. .
ဒါနကြောင့် ၀မ်းသာမယ်၊ စိတ်ချမ်းသာမယ်။
အဲ့ဒီ ငွေရှာဖွေခြင်း သဘောတရားနဲ့
ပေးကမ်းဖို့ ငွေတွေ ရောက်လာပြီး
ရေးသားသူ poemflower at Friday, October 28, 2011 1 comment:
ကင်းစင်မိုးသား ၊ တိမ်ဇာပါး။
မြုမှုန်နှင်းဖွေး ၊ ချမ်းမြအေး။
ကောက်ဦးထွေးထွေး ၊ မုန့် ဆမ်းလွေး
နှံကားဝေဖြာ ၊ ၀င်းမှည့်ဝါ။
လက်တွေ့စက်များ ၊ မရပ်မနား
ဖလ်သားပြင်ကျယ် ၊ နွေပင်လယ် ။
စိုက်ပျိုးအားထုတ် တောင်သူအလုပ် ။
စက်မှု "ကြံ" ပင်
တွင်တွင်ရိတ်စိုက်၊ ချိန်ရှိခိုက် ။
ရေးသားသူ may16 at Tuesday, October 25, 20112comments:
သမီး. . .
စိတ်ဆင်းရဲ သောက ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်
အဲ့ဒီအခါမှာ စိတ်ထင်ရာ လုပ်ချင်တာမျိုး
ငိုယိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ညှင်းဆဲတာမျိုး
သားအဖချင်း ပြောပြရမှာ ရှက်လို့
ကြိတ်မှိတ်ပြိး ခံစားမနေနဲ့ ဦး
အဆန်းမှ မဟုတ်တာ .
တကယ်တော့ အချစ်ဆိုတာ ဘ၀မှ မဟုတ်တာ
ဘ၀ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းလေးတစ်ခုပဲ မဟုတ်လား
ဘ၀တစ်ခုလုံး မပြိုပျက်သင့်ဘူးပေါ့. .
ရေးသားသူ poemflower at Saturday, October 22, 20113comments:
ဂီတဟာ လူသားတွေကို မတူခြားနားတဲ့ အဆင့်တွေ အမြောက်အမြားဆီကို ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ပေးနိုင်တာပါ. . ကျွန်မတို့ အနှစ်သက်ဆုံးဂီတဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့ စိတ်ကို အနှစ်သက်ဆုံး နေရာထိရောက်အောင် ပို့ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်. .
ပါမောက္ခတွေဟာ သူတို့အတန်းထဲက ကျောင်းသားတွေကို စမ်းသပ်မှု အဆင့်ဆင့်ပြုလုပ်ကြတဲ့ နေရာမှာ ဂန္ထ၀င်ဂီတ ပညာရှင်ကြီး မိုးဇက်ရဲ့ ဂီတ တွေကို ဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်တဲ့အခါ ဘာတွေများ ဖြစ်သွားပါသလဲ. . . ကျောင်းသားတွေဟာ သူတို့အလုပ်တွေကို ပိုကောင်းအောင် လုပ်နိုင်ကြပါတယ်. . . ဘာကြောင့်များပါ လိမ့်. . သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ဂီတဟာ ကျွန်မတို့ရဲက ဦးနှောက်ကို လှုံ့ဆော်ပေးတယ်ဆိုတာ တွေ့ရှိခဲ့ကြလို့ပါပဲ.
အချို့ သုတေသန ပြုချက်တွေအရ ဒီလို ဂီတရဲ့ အစွမ်းဟာ ကလေးငယ်လေးတွေ အပေါ်မှာပဲ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိတယ်ဆိုတာတင် မကတော့ဘဲ တကယ့်လက်တွေ့ ဆန်းစစ်ချက်တွေအရ ဂီတဟာ အသက်အရွယ်မရွေး လူသားတွေ အားလုံးအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်. .
၉၂ ရာခိုင်နှုန်းသော လူတွေဟာ သူတို့ နှစ်သက်တဲ့ ဂီတကို နားဆင်လိုကပြီဆိုရင် စိတ်အာရုံ ခံစားမှုဟာ အပြုသဘောဘက်ကို အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိကြပါတယ်. . .စိတ်အာရုံ တက်ကြွမှုနဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေဟာ ဂီတာကို နားဆင်လို်က်ရင် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ သဘာဝအလျောက် တုံ့ပြန်မှုတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်. .
ရေးသားသူ may16 at Tuesday, October 18, 20112comments:
မြန်မာတွေဟာ ကမ္ဘာမှာ အချမ်းသာဆုံး ဖြစ်သင့်တယ်. . .ဒါပေမယ့်. . .
မေတ္တာရှင် - ငါ သြစတြေးလျနိုင်ငံ ဆစ်ဒနီမြို့ကို တရားဟောကြွတော့ ဆစ်ဒနီက ဗုဒ္ဓဘာသာ လူငယ်တွေက မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံး သိသင့်တဲ့ မေးခွန်းတစ်ခု မေးတယ်။ အဲဒီမေးခွန်းက -
မြန်မာတွေဟာ အမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလည်း ကိုးကွယ်ခွင့်ရတယ်။ ဒါနကုသိုလ်လည်း အများကြီးပြုကြတယ်။ အဲဒီနှစ်ချက်ကို ထောက်ကြည့်ရင် မြန်မာတွေဟာ ကမ္ဘာမှာ အချမ်းသာဆုံး ဖြစ်သင့်တယ်။ ဒါပေမယ့် ထင်သလောက် မချမ်းသာဘူး။ အဲဒါ ဘယ်အကြောင်းတွေကြောင့်လဲ တဲ့။
သန်း - ဟာ သိပ်ကောင်းတဲ့ မေးခွန်းပဲ ဘုရား။ ဆရာတော်က ဘယ်လိုဖြေလိုက်လဲ ဘုရား။
မေတ္တာရှင် - အကျဉ်းချုပ် ဖြေလိုက်တာက မြန်မာတွေဟာ ဗုဒ္ဓစကားကို နားမထောင်ကြလို့ ဆင်းရဲနေကြတာလို့ ဖြေလိုက်တယ်။
သန်း - အဲဒီလောက် ကျဉ်းလွန်းအားကြီးတော့လည်း ဘယ်နားလည်ပါ့မလဲ ဘုရား။ နည်းနည်းအကျယ်ချဲ့ ဖြေဦးမှပေါ့ ဘုရား။
မေတ္တာရှင် - မြန်မာအများစု မကြီးပွါးခြင်း အကြောင်း ၁၁ ချက်ကို တွေ့ရတယ်။ အဲဒီ ၁၁ ချက်ကို ပြင်လိုက်လျှင်တော့ ကြီးပွါးချမ်းသာလာကြမှာ။ အဲဒီ ၁၁ ချက်က -
၁။ တကယ် လိုအပ်သော နေရတွင် မလှူဘဲ နာမည်ကြီးမည့် နေရတွင်သာ စုပြုံလှူကြခြင်း။ ဥပမာအားဖြင့် စာသင်တိုက်တစ်တိုက်မှာ ကုဋီ (အိမ်သာ) လိုနေတယ်။ ဒါပေမယ့် လှူမယ့်သူ မရှိဘူး။ ဘာကျတော့ လှူသလဲ ဆိုတော့ ဘုရားခန်းထဲမှာ ရုပ်ပွါးတော်တစ်ဆူ ရှိပြီးဖြစ်လျက်နဲ့ နောက်ထပ် ရှစ်ဆူလောက် ထပ်လှူတော့ ဘုရားကိုးဆူဟာ ကျပ်ကျပ်တည်းတည်း စံနေတော်မူကြရတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာအများစုဟာ ဘုရားဒကာ၊ ဘုရားအမသာ အမည်ခံချင်ကြတာ။ အိမ်သာဒကာ၊ အိမ်သာအမ အမည်မခံချင်ကြဘူး။ လှူတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်အတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ အလှူခံအတွက်ပါ။ ဒါကြောင့် အလှူခံ လိုအပ်တာကို ရွေးချယ်ပြီး လှူသင့်တယ်။ ကိုယ်လှူချင်တာကို ရမ်းပြီး မလှူသင့်ဘူး။
၂။ မြတ်စွာဘုရားက အင်္ဂုတ္တိရ်ပါဠိတော် ဇဏုသောဏိသုတ်မှာ သမ္မဒါလေးပါးနဲ့ ပြည့်စုံရင် ကြီးပွါးချမ်းသာမယ်လို့ ဟောခဲ့တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာအများစုဟာ တစ်ပါးမှ မပြည့်စုံဘူး။
၃။ ဘာသာရေးအပေါ်မှာ ထားတဲ့ မေတ္တာ စေတနာမျိုးကို စီးပွါးရေးအပေါ်မှာ မထားကြလို့လည်း မြန်မာအများစုဟာ ကြီးပွါးသင့်သလောက် မကြီးပွါးကြဘူး။
၄။ ပျင်းရိခြင်း အကုသိုလ်ကို ရောင့်ရဲခြင်းကုသိုလ်လို့ အထင်မှား ကျင့်သုံးနေတဲ့အတွက်လည်း မြန်မာတွေဟာ ကြီးပွါးသင့်သလောက် မကြီးပွါးကြဘူး။
၅။ အတ္တသမာပဏီဓိ မင်္ဂလာချို့တဲ့လို့ တစ်နည်းအားဖြင့် မိမိကိုယ်မိမိ ကောင်းတဲ့အလုပ်မှာ ဆောက်တည်နေနိုင်စွမ်း မရှိလို့လည်း မြန်မာအများစုဟာ ကြီးပွါးသင့်သလောက် မကြီးပွါးကြဘူး။
၆။ အချိန်တန်ဖိုးကို မသိကြတဲ့အတွက်လည်း ကြီးပွါးသင့်သလောက် မကြီးပွါးကြဘူး။ အချိန်တန်ဖိုး သိတဲ့သူများဟာ ဥစ္စာစည်းစိမ်ကို ရခြင်း၊ ကုသိုလ်တရားကို ရခြင်း၊ ပညာဗဟုသုတကို ရခြင်း အမျိုးမျိုးနဲ့ အချိန်ကို တန်ဖိုးရှိစွာ အသုံးချတယ်။ အချိန်တန်ဖိုး မသိတဲ့သူများကတော့ မြူးထူးပျော်ပါးကစားခြင်း၊ ငြင်းခုံခိုက်ရန် စကားများခြင်း အချိန်ကို တန်ဖိုးမဲ့စွာ အသုံးချတယ်။
၇။ ကိုယ့်ထက်သာလျှင် မနာလိုဖြစ်ပြီး သူတစ်ပါးအကျိုး ပျက်စီးအောင် ဖျက်ဆီးတတ်ကြတယ်။ ဒီအချက်ဟာလည်း မြန်မာအများစု မကြီးပွါးခြင်းရဲ့ အကြောင်းတစ်ခုပဲ။ ကိုယ့်ထက်သာလို့ ဝမ်းသာရင် မုဒိတာလို့ ခေါ်တဲ့ ကုသိုလ်တရားဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်ထက်သာလို့ မနာလိုဖြစ်ရင် ဣဿာဆိုတဲ့ အကုသိုလ်တရား ဖြစ်တယ်။
ပညာရှိ ပညာမဲ့ဆိုတာ ဒီနေရာမှာ ကွဲသွားတာပဲ။ ပညာရှိက ကိုယ့်ထက်သာတဲ့ လူကိုတွေ့ရင် ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ မုဒိတာကုသိုလ်ကို အရယူတယ်။ ပညာမဲ့က ကိုယ့်ထက်သာတဲံသူကို တွေ့ရင် ဣဿာလို့ခေါ်တဲ့ အကုသိုလ်ကို အရယူတယ်။ ဒေါက်တာဘွဲ့ကြီး ရထားပါစေ၊ မနာလိုတတ်တဲ့သူဟာ ပညာမဲ့ပါပဲ။ ဘာအတန်းပညာမှ မတတ်ရင် နေပါစေ၊ ကိုယ့်ထက်သာတဲ့ သူအပေါ်မှာ ဝမ်းမြောက်ရင် ပညာရှိပဲ။
ဣဿာဖြစ်နေသလား၊ မုဒိတာဖြစ်နေသလား ဆိုတာ သူ့ရဲ့နှုတ်က ထုတ်ဖော် အစီရင်ခံပါလိမ့်မယ်။ တော်တာကို တော်ပါတယ်လို့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ချီးမွမ်းစကားပြောရင် သူ့သန္တာန်မှာ မုဒိတာတရား ဖြစ်နေတယ်လို့ သိနိုင်တယ်။ မချီးမွမ်းဘဲ နှုတ်ဆိတ်နေခြင်း၊ မပြောပလောက်တဲ့ အားနည်းချက်ကို ထောက်ပြပြီး အပြစ်ပြောနေခြင်းဟာ သူ့သန္တာန်မှာ ဣဿာဖြစ်တယ်လို့ ပြတာပါပဲ။
ပညာမဲ့က သူ့သန္တာန်မှာ ဣဿာတရားဖြစ်နေတယ် ဆိုတာကို သူတစ်ပါးရဲ့ အပြစ်ကို အတုံးလိုက် အတစ်လိုက်ပြပြီး ထင်ထင်ရှားရှား ပြတယ်။ ပညာတတ်တွေကျတော့ သူတို့သန္တာန်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ဣဿာကို ထင်ထင်ရှားရှား မပြဘူး။ မသိမသာဘဲ ပြတယ်။ ပညာတတ်က သူတို့သန္တာန်မှာ ဣဿာဖြစ်နေတာကို သူတစ်ပါး သိသွားမှာကိုလည်း စိုးရိမ်တယ်။ အဲဒီတော့ ပညာတတ်က အောင်မြင်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ မပြောပလောက်တဲ့ အပြစ်ကလေးကို ခပ်ပါးပါး ထောက်ပြပြီး အမှတ်ယူတတ်တယ်။ အပေါ်ယံ ကြည့်ရင်တော့ အောင်မြင်နေတဲ့ လူရော၊ သူ့နောက်လိုက်တပည့်တွေကိုပါ မှားမှာစိုးလို့ သတိပေးတဲ့ ပုံစံမျိုးပေါ့။ အမှန်က မိမိရဲ့ဣဿာကို သူတစ်ပါး မသိအောင် ခပ်ပါးပါး လှစ်ပြတာပါပဲ။
၈။ မြန်မာအများစု မကြီးပွါးခြင်းရဲ့ နံပါတ်ရှစ် အကြောင်းကတော့ စာပေဗဟုသုတ မရှိတာပါပဲ။
၉။ နံပါတ် ၉ အကြောင်းကတော့ ဒေသန္တရဗဟုသုတ မရှိတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် စာပေဗဟုသုတရှိအောင် စာမျိုးစုံ ဖတ်သင့်ပြီး တစ်နှစ် တစ်ကြိမ် ဒေသန္တရဗဟုသုတခရီးကို သွားသင့်ပါတယ်။
၁၀။ နံပါတ်တစ်ဆယ် အကြောင်းကတော့ ခေါင်းဆောင်စိတ် နည်းပါးတာပါပဲ။ ကောင်းတဲ့ အလုပ်ဆိုရင် မခိုင်းဘဲ လုပ်တာ။ အလုပ်ကို အများကြီး လုပ်ပြီး အခွင့်အရေးကို နည်းနည်းယူတာတွေဟာ ခေါင်းဆောင်စိတ်ပါပဲ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် ခိုင်းမှ လုပ်တတ်တာ။ အလုပ်ကို နည်းနည်းလုပ်ပြီး အခွင့်အရေး အများကြီးယူတာဟာ နောက်လိုက်စိတ် ခေါ် ကျွန်စိတ်ပါပဲ။
၁၁။ မြန်မာအများစု မကြီးပွါးခြင်းရဲ့ ၁၁ ခုမြောက် အကြောင်းကတော့ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးလိုစိတ် နည်းပါးတာပါပဲ။ အနောက်တိုင်းနိုင်ငံ အများစုက အရှေ့တိုင်းနိုင်ငံ အများစုထက် ချမ်းသာကြွယ်ဝနေရခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းဟာ ၁၈ နှစ်ပြည့်တာနဲ့ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး စီးပွါးရေး အလုပ်လုပ်ကြလို့ပဲ။ အနောက်နိုင်ငံက လူငယ်တွေဟာ ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးတာနဲ့ လူကြီးဖြစ်ပြီလို့ သတ်မှတ်ပြီး စီးပွါးရေးလုပ်ငန်း၊ တစ်နည်း ငွေဝင်တဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုခုကို မဖြစ်မနေ လုပ်ကြတော့တာပဲ။
မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦး နယူးဇီလန်နိုင်ငံကို ပညာတော်သင် ရောက်သွားတယ်။ တစ်နေ့ ကိစ္စတစ်ခုရှိလို့ တက္ကစီ ငှားစီးသွားတယ်။ ကားမောင်းသမားလေးက အသက် ငယ်ရွယ်သူလေး ဖြစ်နေလို့ ကျောင်းမတက်ဘူးလားလို့ မေးကြည့်တဲ့အခါ ဆေးတက္ကသိုလ် နောက်ဆုံးနှစ် ကျောင်းသားဖြစ်နေတယ်။ မြန်မာအမျိုးသမီးဆိုတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ အလေ့အထအတိုင်း မိဘက မတတ်နိုင်လို့ တက္ကစီမောင်းနေရတာလို့ ထင်သွားတာပေါ့။
သန်း - အဲဒီအတိုင်း ဟုတ်ပါသလား ဘုရား။
မေတ္တာရှင် - ဘယ်ဟုတ်ရမှာလဲ။ မေးလိုက်တဲ့အခါ ဟိုက ဘယ်လို ပြောသလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ အလေ့အထက အနောက်တိုင်းဆန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၁၈ နှစ် ပြည့်ပြီးတာနဲ့ မိဘကို အားကိုးပြီး မနေကြပါဘူး။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း တစ်ခုခုလုပ်ပြီး ငွေရှာပါတယ်။ အဲဒီငွေနဲ့ ကျောင်းတက်ပါတယ်။ ၁၈ နှစ် ပြည့်ပြီးရင် လူကြီးဖြစ်ပြီလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ လူကြီးဘဝ ရောက်နေပြီ ဖြစ်ရက်နဲ့ မိဘလုပ်စာ ထိုင်စားရမှာ မိဘလုပ်စာနဲ့ ကျောင်းတက်ရမှာကို အင်မတန် ရှက်ကြပါတယ်။
၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေ တွေ့ကြတဲ့အခါ ဘယအလုပ် လုပ်သလဲလို့ မေးမြန်းနှုတ်ဆက်တတ်ပါတယ်။ ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူ ဖြစ်ရက်နဲ့ စီးပွါးရေး အလုပ်တစ်ခုမှ မလုပ်တဲ့သူကို လူရာမဝင်သူလို့ သတ်မှတ်ပြီး ဘယ်သူမှ အပေါင်းအသင်း မလုပ်ကြပါဘူးလို့ အားရပါးရ ပြန်ပြောတယ်။
သန်း - တပည့်တော်တို့ မြန်မာလူငယ်တွေနဲ့ ကွာလိုက်တာ ဘုရား။ ဒီမှာတော့ ကိုယ့်ကျောင်းစရိတ် ကိုယ်ရှာပြီး ကျောင်းတက်တဲ့လူကို ဆင်းရဲသားဆိုပြီး ဝိုင်းအထင်သေးကြတယ်။ မိဘလုပ်စာစား၊ မိဘအိမ်က ကားနဲ့ စတိုင်ကျကျ ကျောင်းတက်နိုင်သူကိုမှ သူဌေးဆိုပြီး အထင်ကြီးကြတယ်။
မေတ္တာရှင် - အေး ဟုတ်တယ်။ မြန်မာ အများစုဟာ ဂုဏ်မယူသင့်တာတွေကို ဂုဏ်ယူပြီး ဂုဏ်ယူသင့်တာကို ဂုဏ်မယူတဲ့အတွက် ကြီးပွါးသင့်သလောက် မကြီးပွါးကြတာဘဲ။
Facebook လင့်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်.
ရေးသားသူ poemflower at Sunday, October 16, 2011 1 comment:
တစ်နေ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ လမ်းတစ်လမ်းမှာ ဆုံပါတယ်. . သူက ရွှေလင်ပန်းနဲ့ အချင်းဆေးတယ် ဆိုရလောက်အောင် ချမ်းသာတဲ့ မိသားစုက မွေးဖွားလာတာပါ. . . အခုအထိလည်း သူ့ရဲ့စီးပွား ဥစ္စာက ယုတ်လျော့သွားတယ်လို့ မရှိပါဘူး . . . တစ်နေ့တစ်ခြား တိုးပွားနေတဲ့ သတင်း၊ သူ့လုပ်ငန်းတွေ အောင်မြင်နေတဲ့ သတင်းကိုပဲ ကြားရတာပါ. . .
ဆုံတုန်း ဆုံခိုက် ထွေရာလေးပါး ပြောဖြစ်နေရင်းက ဒုက္ခတွေ အကြောင်း စကားစပ်မိသွားပါတယ်. .
သူငယ်ချင်း. . . . "အေးကွာ. . . ငါ့မှာ ဒုက္ခတွေက အတော်များတာ ကွ. . အခုပဲ ကြည့်လေ. . ငါ့ကားပျက်လို့ လမ်းလျှောက်လာရတယ်. . အဲဒီကားကို ၀ပ်ရှော့ပို့ဖို့ ကားတစ်စီးငှားရဥိးမယ်. . . . . အရေးထဲ ငါ့ Hand Phone ကလည်း ဘာဖြစ်သွားလဲ မသိဘူး . . . ခေါ်လို့မရတော့ဘူး. . . အလုပ်ကိစ္စအရေးတကြီး ချိန်းထားတာတွေ . .နောက်ကျကုန်တော့ နာမည်တော့ ပျက်ပါပြီကွာ. . . အိမ်ကလည်း ဆောက်နေတုန်း တန်းလန်း ငွေပြတ်. . ."
သူ့စကားကို ဆုံးအောင် နားမထာင်တော့ ပဲ သူ့ကို နှုတ်ဆက်ပြီး ထွက်လာခဲ့ပါတယ်. . . . အချိန်ဘယ်လောက်ကြာ မှ ဆင်းရဲသား တွေရဲ့ ဒုက္ခအကြောင်းကို သူ့ကို ပြောခွင့်ရမယ် မထင်ပါဘူး. . .
ရေးသားသူ may16 at Friday, October 14, 20115comments:
သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့အကြောင်းကို လူအများစု သိရှိကြတာ များပါသည်။ လူအများ သိရှိထား ကြသလိုပင် ဗုဒ္ဓလက်ထက်တော်မှ စကာ ယနေ့အထိ အစဉ်အလာ ကောင်းခဲ့သော နေ့ထူးနေ့မြတ် တနေ့ လည်း ဖြစ်နေသည်။
ဘုရားသားတော် ရဟန်းတော်များ ၀ါတွင်းသုံးလအတွင်းမှ ၀ါကျွတ်သောနေ့၊
အပြစ်ရှိက ပြောကြားပါရန် ၀ါဆိုသောသံဃာ အချင်းချင်း ဖိတ်မာန် အမှုပြုကြသော မဟာပ၀ါရဏာနေ့၊
ဘုရားရှင်တာဝတိံသာနတ်ပြည်၌ အဘိဓမ္မာ တရားတော်ကို ဟောကြား အောင်မြင်တော်မူသော အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့၊
နတ်ဗြဟ္မာအပေါင်းခြံရံလျက် တာဝတိံသာမှ သင်္ကဿနဂိုရ်ပြည်သို့ ဆင်းသက်တော်မူသောနေ့၊
ထိုသို့ဘုရားရှင် ဆင်းသက်တော်မူသည်ကို ရည်စူးပူဇော်သောအားဖြင့် ဆီးမီးစသည် ထွန်းညှိပူဇော်သောနေ့၊
စကြာဝဠာတိုက်တစ်သောင်းမှ လူ နတ် ဗြဟ္မာသတ္တ၀ါ အားလုံးတို့သည် တဦးကို တဦးအချင်းချင်း မြင်နေကြရပြီး လူ့ပြည် နတ်ပြည် ဗြဟ္မာ့ပြည်အားဖြင့် ဒိုးယိုပေါက် ထုတ်ချင်းပေါက် ရောင်ခြည်တော်များဖြင့် လင်ထိန်နေကာ ဘုရားရှင်အား အတူတကွ ကြည်ညို ပူဇော်ရသောနေ့၊
နတ်လူအများတို့သည် ဘုရားရှင်၏ တန်ခိုးတော်အနန္တကို ဖူးမြင်ကြရကား အားကျကြည်ညိုစိတ်ဖြင့် သင်္ကဿမြို့တွင် စုဝေးနေကြသော ပရိသတ်အများစု၏ ဘုရားဆုပန် သောနေ့ စသော ဂုဏ်ပေါင်းတို့ဖြင့် ပြည့်စုံသော နေ့ထူး နေ့မြတ် ပင်ဖြစ်ပါသည်။
တာဝတိံသာနတ်ပြည် မကြွခင် အခြေအနေများ
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် ဘုရားဖြစ်တော်မူပြီး ( ၇ ) ၀ါမြောက်ဝါဆိုခါနီးတွင် သာဝတ္ထိမြို့ ကဏ္ဍသရက် ဥယျာဉ်အတွင်း၌ တိတ္ထိများ နှင့် တန်ခိုးပြိုင်မည် ဟု ကြေညာတော်မူကာ ရေမီးအစုံစုံ တန်ခိုးပြာဋိဟာတို့ကို ပြတော်မူခဲ့သည်၊ ဃရဏီမည်သော အနာ ဂါမ်ဥပါသိကာမ၊ စူဠအနာထပိဏ်မည်သော အနာဂါမ်ဥပါသကာ၊ ပဋိသမ္ဘိဒါပတ္တ စီရမည်သော ရဟန္တာသာမဏေမ၊ စုန္ဒမည်သော ရဟန္တာကိုရင်လေး၊ ဘိက္ခုနီလက်ဝဲတော်ရံ တန်ခိုးအရာ ဧတဒဂ်ရ ရဟန္တာမ ဥပ္ပလ၀ဏ္ဏာနှင့် လက်ဝဲတော်ရံ အရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန် မထေရ်တို့က ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်အစား တိတ္ထိတို့နှင့် တန်ခိုးပြိုင်ပါမည် ဟု လျောက်ထားကြ သည်၊
သို့သော်လည်း ဘုရားရှင်သည် ဤနေရာတွင် ငါဘုရား၏ တာဝန်ဖြစ်သည်၊ သင်တို့နှင့် မသက်ဆိုင်ပါ၊ တကယ် အရေးကြုံလာလျင် ငါဘုရားထမ်းဆောင်ရမည့် တာဝန်ကို မည်သူတဦးတယောက်ကမှ မထမ်းဆောင်နိုင်ကြပေဘူး ဟု မိန့်မြွက်တော်မူကာ ကဏှဥသဘဇာတ်တော် ( ဇာ ဋ္ဌ ၁၊ ၁၊ ၁၉ ) နှင့် နန္ဒိဝိသာလ ဘုရားအလောင်း နွားလားဥသဘ ဇာတ်တော် တို့ကို ဟောကြားေ တ်ာမူကာ တပည့်ပရိသတ်များကို ဖြေသိမ့်ပေးတော်မူခဲ့သည်။
ထို့နောက်တွင်တော့ ကိုယ်တော်တိုင် တေဇောကသိုဏ်းသမာပတ်၏ အစွမ်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းမှ မီးတောက် အလျံများ ထွက်နေသော်လည်း ကိုယ်တော် အထက်ပိုင်းမှ အာပေါကသိုဏ်းသမာပတ်၏အစွမ်းဖြင့် ရေအလျံများ ထွက်ကျ နေအောင် တန်ခိုးအမျိုးမျိုးကို ဖန်ဆင်းပြ တော်မူသည်၊ ခန္ဓာကိုယ်နောက်ပိုင်းမှ ရေအလျံများ ကျနေလျင် ရှေ့ပိုင်းကိုယ်မှ မီးတောက်များ ထွက်နေအောင် ဖန်ဆင်း ပြတော်မူခဲ့သည်၊ ပရိသတ်ထဲမှ တယောက်ချင်းစီ၏ စိတ်အလိုကို ကြည့်တော်မူကာ သူတို့စိတ် အလိုကျ၊ မြင်ချင်သလို တန်းခိုးအမျိုးအစားကို ဖန်ဆင်းတော်မူပြီး နှုတ်တော်မှလည်း တရားဟောတော်မူသည်။
ဘုရားရှင်၏ စိတ်ဖြစ်စဉ် လျင်မြန်လွန်းသောကြောင့် ကသိုဏ်းဈာန်များကို နိုင်နိုင်နင်းနင်း ၀င်စားကာ တန်ခိုးတော်တို့ကို တမျိုးပြီးတမျိုး မရိုးနိုင်အောင် ဖန်ဆင်းနေသည်ကို ကြည့်ရှု ဖူးမြင်ရသူ လူအပေါင်းတို့၏ စိတ်ထဲတွင် တပြိုင်နက်တည်း ရေရော မီးရောထွက်နေသယောင် ထင်မှတ်နေကြ ရသည်။ ဤကား ဘုရားရှင်၏ တိတ္ထိတို့နှင့် တန်ခိုးပြိုင်စဉ် မြင်ကွင်း တစ်ချို့ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချိန်မှ စ၍ တိတ္ထိတို့လဲ ကစဉ့် ကလျား ဖရိုမရဲ ထွက်ပြေးကြကာ ပုရာဏကဿပသည်ကား မိမိလည်ပင်းတွင် သဲအိုးကို ကြိုးချည်ဆွဲကာ မြစ်ထဲခုန်ချပြီး ဘ၀နိဂုံးအဆုံး သတ်သွားသည် ဟူ၏၊ ယနေ့အထိ အ၀ီစိငရဲ မှာ ရှိနေသည်ဟု ဆိုပါသည်။
ရေမီးအစုံစုံသော တန်ခိုးပြာဋိဟာတို့ကို ပြတော်မူပြီးသည်နှင့် တပြိုင်နက် ညာဖက်ခြေဖ၀ါးကို လှမ်းကာ ယုဂန္ဓိုရ်တောင် ထိပ်ပေါ်နင်းပြီး၊ ဘယ်ဖက်ခြေလှမ်းကို မြင့်မိုရ်တောင်ထိပ်တွင် ချတော်မူသည်၊ ထို့နောက် တာဝတိံသာနတ်ပြည် ပင်လယ် ကသစ်ပင်ခြေရင်းမှ သိကြားမင်း၏ ပဏ္ဍုကမ္ဗလာ မြကျောက်ဖြာထက်တွင် ထိုင်တော်မူကာ လူ့ဘ၀က မယ်တော်ဖြစ်ခဲ့ ဖူးသော မယ်တော်မာယာတဖြစ်လဲ သန္တုဿိတနတ်သား အမှုးပြုသော နတ်ဗြဟ္မာများအား အဘိဓမ္မာ ပဋ္ဌာန်းတရား တော်ကြီးကို အကျယ်တ၀င့် ဟောပြတော်မူခဲ့သည်၊
မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် တာဝတိံသာနတ်ပြည်တွင် ၀ါတွင်းသုံးလ ပတ်လုံးနေ့မနား ညမနား ပဋ္ဌာန်းတရား တော် ကို ဟောကြားတော်မူရာတွင် နတ်တို့အတွက် မိနစ်ပိုင်းမျှ ဖြစ်သော်လည်း လူသားဖြစ်သော ဘုရားရှင် အတွက်မူ အစာအာဟာရ မဘုန်းပေးပဲ မဖြစ်နိုင်ရကား ပုံတူနိမ္မိတ ဘုရားရှင်ကို ဖန်ဆင်းပြီး တရားကို ဒီနေရာမှ ဒီနေရာအထိ ဟောခဲ့စေသတည်း ဟု အဓိဋ္ဌာန်ကာ ကိုယ်တော်တိုင်က မြောက်ကျွန်း အနောတတ္တရေအိုင်သို့ ကြွကာ ဆွမ်းဘုန်းပေး တော်မူပြီး တဖန်ပြန် လည် ဟော ကြားတော်မူခဲ့သည်၊ နတ်ဗြဟ္မာတို့၏ စိတ်တွင်ကား ဘုရားရှင်တ ပါးတည်း ဟောကြား နေသည် ဟု မှတ်ထင်နေ ကြ၏၊ ပြန်ေ ရာက်ပါမှ တရားတော်ကို ရောက်သည့်နေရာမှ ဆက်လက် ဟောကြားတော်မူသည်၊
အရှင်သာရိပုတ္တရာ သည်လည်း လူ့ပြည်မှတက်ကာ ဘုရားရှင် ဆွမ်းဘုန်းပေးနေစဉ်အတွင်း ၀တ်ကြီး ၀တ်ငယ် ကို ပြုစု ပေးတော်မူ၏၊ ထိုအချိန်လေးအတွင်းမှာပင် သာရိပုတ္တရာ ငါဘုရားကတော့ ဒီနေ့မှာ အဘိဓမ္မာတရားကို ဒီနေရာကနေ ဒီနေရာ အထိ ဘယ်လို ဘယ်လို ဟောထားခဲ့တယ် ဆိုပြီး အကျဉ်းဆုံးနည်းကို လမ်းပြညွှန်တော်မူ၏၊ ထိုအကျဉ်းဆုံးကိုပင် အရှင် သာရိပုတ္တရာကလည်း သူဥာဏ်ရှိသလို ချဲ့ထွင်ကာ ရှေးအခါက လင်းနို့သား ငါးရာအဖြစ်ဖြင့် အဘိဓမ္မာတရားကို နာဖူးခဲ့သော ပါရမီအထုံရှိခဲ့သည့် တပည့်သားရဟန်းနောက်လိုက် ငါးရာကို တဆင့်ပြန်လည်ဟောကြားခဲ့သည်။ ( ထိုရ ဟန်းများသည် ၀ါမဆိုခင်အချိန်က ဘုရားရှင် တန်ခိုးပြသည်ကိုကြည်ညိုကာ သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြသော လူ ဒကာများဖြစ်ကြ၏ )
ယနေ့စာရေးသူတို့ သင်ယူလေ့လာနေကြရသော အဘိဓမ္မာ ပဋ္ဌာန်းတရားတော်များသည် အရှင်သာရိပုတ္တရာ ဟောကြား တော်မူခဲ့သော မကျဉ်းမကျယ်နည်းမျှသာတည်း၊ အကယ်၍သာ ဘုရားရှင်ဟောခဲ့သလို အကျယ်တ၀င့် သင်ယူရပါမူ မည်သို့မျှ ဆုံးခန်းတိုင်မည် မဟုတ်ဟု မှတ်ထင်ရပေသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဥာဏ်ရှိလျင် ရှိသလောက်၊ ချဲ့ထွင်နိုင် လျင် ချဲ့ထွင်နိုင်သလောက် နည်းပေါင်းများစွာ နယ်ပယ် ပေါင်းများစွာ ကျယ်ဝန်းသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်ကား သီတင်းကျွတ် လပြည့်မရောက်ခင် တနည်းအားဖြင့် ၀ါမကျွတ်ခင် နတ်ပြည်သို့တက်လှမ်းကာ တရားဟောပုံ ဖြစ်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် အဘိဓမ္မာတရားတော်ကို ဟောပြီးသည့်အခါ အရှင်မောဂ္ဂလာန်က နတ်ပြည်တက်လာကာ မြတ်စွာဘုရား လူ့ပြည်မှာ ဘယ်နေရာမှာ ဆင်းသက်ပါမလဲဘုရားဟု လျောက်ထားသောကြောင့် .. ငါ၏ သားကြီးလက်ယာတော်ရံ သာရိပုတ္တရာနှင့် တပည့်ငါးရာရှိနေရာ သင်္ကဿမြို့ကို ဆင်းတော်မူမယ်၊ သို့သော်လည်း ယခုလက်ရှိ သာဝတ္ထိက ပရိသတ်တွေ အားလုံးကို တန်ခိုးတော်နဲ့ မနက်ခင်းမှာ ကျောင်းကို ဥပုသ်စောင့်သွားကြသလို သင်္ကဿမြို့ကို ခေါ်စေမယ် ဟု မိန့်တော်မူသည်။ ထိုသို့ဆင်းသက်စဉ် သိကြားမင်းသည် စောင်းတန်းသုံးမျိုးဖန်ဆင်းကာ အလယ်ပတ္တမြားစောင်းတန်းမှ ဆင်းသက်တော်မူသည်။
ဗြဟ္မာပရိသတ်များက ဘုရားရှင်၏ လက်ဝဲဘက် ငွေစောင်းတန်းမှ၎င်း၊ နတ်ပရိသတ်များက လက်ယာဘက် ရွှေစောင်း တန်းမှ၎င်း၊ ပဉ္စသီခ နတ်သားက ဘုရားရှင်၏ လက်ယာဘက်မှ ဗေလုဝနတ်စောင်းကို တီးခတ်ကာ ဂုဏ်တော်တို့ကို ရွတ်ဆိုသီကြူးလျက်၎င်း၊ မာတလိနတ်သားက လက်ဝဲဘက်မှ နတ်ပန်းနံ့သာ များ ကြဲချလျက်၎င်း၊
ဗြဟ္မာ့ပြည်မှ တန်ခိုးအကြီးဆုံး မဟာဗြဟ္မာကြီးသည် ဘုရားရှင်အား ထီးမိုးလျက်၎င်း၊သုယာမနတ်မင်းကြီးသည် ဘုရား ရှင်အား သားမြီးယပ်ခပ်ပေးလျက်၎င်း ကြည်နူးမဆုံးနိုင်သော အသရေတော်ဖြင့် ရတနာစောင်းတန်းအသီးသီးမှ ဆင်း သက်တော်မူခဲ့သည်၊ အထူးခြားဆုံးကား လူတွေ နတ်တွေ ဗြဟ္မာတွေ အားလုံး တယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက် မြင်နိုင်ကြခြင်း ဖြစ်ရကား အတွေြး ဖင့် မြင်ေ ယာင်ကြည့်သည်ကပင် တော်တော် ပီတိဖြစ်စရာ ကောင်းပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်လည်း မြင်သမျှ ပရိသတ်များက ဆီမီးမျိုးစုံ ထွန်းညှိကာ ပူဇော်ကြိုဆိုနေကြရကား အားကျကြည်ညို သော ကြောင့် ဘုရားဆု တောင်းကြခြင်းများလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ဘုရားရှင် တာဝတိံသာ နတ်ပြည်မှ အဆင်းတွင် ပရိသတ်အားလုံးတို့အား တရားဟောတော်မူရာ လင်းနို့သားငါး ရာဖြစ်ဖူး သောရဟန်းငါးရာ ရဟန္တာဖြစ်တော်မူကြသည်၊ နောက်တဖန် ဘုရားရှင်၏ သင်္ကဿမြို့၌ လက်ယာဘက် ခြေချမိရာ ဋ္ဌာန တွင် ဘုရားအားလုံးတို့ မစွန့်လွှတ်ရာ နေရာတစ်ခုဖြစ်သော အ၀ိဇဟိတဋ္ဌာနအဖြစ် အစလစေတီ ဟု ယနေ့တိုင် ခေါ်ဝေါ်ေ နကြ ဆဲဖြစ် သည်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးနောက်ပိုင်း သာသနာသက္ကရာဇ် ( ၂၁၈ ) ခုနှစ်တွင် သီရိဓမ္မာသောကမင်းကြီးသည် ဘုရား ရှင် နတ်ပြည်မှ ဆင်းသက်ခဲ့ရာ နေရာ၌ စေတီကြီးတစ်ဆူ၊ ကျောင်းတိုက်ကြီးတစ်ခုနှင့် ဆင်ရုပ်ပါ ကျောက်တိုင်တစ်တိုင်ကို စိုက်ထူထားခဲ့သည်၊ သို့ရာတွင် ခရစ်နှစ် ( ၁၁၈၃ ) တွင် ဇယချန္ဒရ Jayachandra မည်သော ဟိန္ဒူဘာသာကိုး ကွယ်သော မင်းသည် သာသနာပ ပုဏ္ဏားတို့၏ စကားကို နားထောင် ကာ အစလစေတီနေရာရှိ အသောကမ င်းကြီး ကောင်းမှု စေတီနှင့် ကျောင်း တိုက်ကြီးတို့ကို အစဖျောက် ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့လေ သည်။ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သော ရှင်ဘုရင် မကောင်းလျင် သာသနာသည် လည်း ရေရှည် မတည်တံ့နိုင် ဟူသော သာဓကတစ်ရပ်ပင် မဟုတ်ပါလော ..
အသောက မင်းကြီး၏ ကောင်းမှုတော်သင်္ကေတကို ယနေ့ခေတ် သင်္ကဿမြို့တွင် မြင်နိုင်ဦးမည်လား မသေချာတော့ပါ၊
သင်္ကဿမြို့ ဘုရားရှင်၏ လက်ယာ ခြေတော်ရာချနင်းရာ နေရာတွင် အစလစေတီ နေရာကို အသောက မင်းကြီး ကောင်း မှုဖြင့် ဖူးတွ့ နိုင်သေးပါသည် ...
1842 ခုနှစ်တွင် ဘရစ်တစ် ပညာရှင် အလက်ဇန္ဒား ချန်နင်ဂန် Alexander Cunningham မှ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ထိုမှနောက် နှစ်ပေါင်း ( ၈၇ ) နှစ်အကြာတွင် အနာဂါရိက ဓမ္မပါလ Sir Anagarika Dharmmapala က သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှ လာရောက် ရှာဖွေဖော် ထုတ်ခဲ့ပြန်သည်။
သင်္ကဿမြို့၏ မြောက်ဖက်တွင် ဂင်္ဂါမြစ်ရှိ၍ တောင်ဘက်တွင် ယမုံနာမြစ်ရှိရကား မြစ်နှစ်ခု ကြားက ထူးခြားသော မြို့ဟု ပင်ဆိုရ ပါမည်၊ မထုရာမြို့မှ ၄ ယူဇနာ ( မိုင်ပေါင်း ၂၄ မိုင် ) မျှသာ ဝေးကွာ၏၊( ဣတော မထုရာယ စတူသု ယောဇနေသု သင်္ကဿံနာမ နဂရံ အတ္ထိ )မှတ်ချက်-- ခေတ်သစ် အနောက်တိုင်း ပညာရှင်တို့၏ တိုင်းထွာချက်အရ တယူဇနာတွင် ( ၈ ) မိုင်မျှသာ ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ကြသည်၊ သို့သော် အချို့သော စာပေများတွင် ၁၀ မိုင်၊ ၁၂ မိုင်စသည်ဖြင့် မူကွဲများစွာ တွေ့ရတတ်သေး၏။ ဗုဒ္ဓခေတ်က ယူဇနာအကွာအဝေးကို သုံးကြပြီး ယနေ့ခေတ်မှာတော့ မြန်မာလူမျိုးများ ရှေးခေတ် ကသုံးခဲ့ကြသလို အတောင်၊ အထွာ အသုံးအနှုံး များလဲ မသုံးတော့ပါ၊ မိုင်၊ တိုင်၊ ကီလိုမီတာ စသည်ဖြင့်သာ သုံးကြတော့သည်၊ တိုးတက်သော ခေတ် ကာလ ၏ ပြယုဂ်တစ်ခုပင်တည်း။
ယနေ့အချိန်တွင် သင်္ကဿမြို့Sankasya သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဥတ္တရာပရာဒေရှ် ( Uttar Pradesh )ပြည်နယ်၊အရှေ့ပိုင်း အိန္ဒိယရထားလမ်းပေါ်ရှိ ကိုဟာဘတ်နှင့် ဖရုခါဗဒ် ( Farukhabad ) မြို့အကြား ပခန( Pakhna ) ဘူတာမှ ၅ မိုင်ဝေးကွာ သော ဗဆန္တပုရ် ( Basantpur ) ရွာအနီး၌ တည်ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
ဤသို့သော အဖြစ်အပျက်များကို လေ့လာခြင်းဖြင့် သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့တွင် သံဃာတော်များက ပ၀ါရဏာ ပြုရန် စုဝေးကြ ရခြင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံးတို့သည်လည်း ဘုရားရှင်အား ဆီးမီးမျိုးစုံဖြင့် ပူဇော်ခြင်း၊ အဘိဓမ္မာပဋ္ဌာန်း တရားတော်ဖြင့် ရွတ်ဖတ် ပူဇော်ကြခြင်းဖြင့် ကောင်းမြတ်သော အထွဋ်အမြတ်ဖြစ်သော ဘုရားရှင်၏ ဂုဏ်တော်တို့ကို အာရုံပြုကာ အထူးတလည် ကြည်ညို စရာ နေ့ထူးနေ့မြတ်တနေ့သာ ဖြစ်ပါတော့သည်။
အရှင်သုနန္ဒာလင်္ကာရ M.A ( ပန်းကမ္ဘာ )
စာညွှန်း။ ။ ဒေဝေါရောဟဏ၀တ္ထု၊ ဗုဒ္ဓ၀ဂ်၊ ဓမ္မပဒအဋ္ဌကထာ၊
သာဝတ္ထိမြန်မာကျောင်းဆရာတော် ဦးသြဘာသ၏ မဇ္ဈိမဒေသမြို့ရွာများမှ သမိုင်းရုပ်ကြွင်း ပုံရိပ်လွှာများ၊
သင်္ကဿနဂိုရ် နှင့် ပက်သက်သော မှတ်တမ်းများကိုဒီနေရာနှင့် ဒီနေရာများမှာ လေ့လာနိုင်ပါသေးသည်။
ပို့စ်ကို ဘုန်းဘုန်းပန်းကမ္ဘာ ဆိုဒ်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်.
ရေးသားသူ poemflower at Tuesday, October 11, 20114comments:
လက်ဖက်သည် တရုတ်ပြည်တွင် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းလေးထောင်ကျော်ကတည်းက သုံးစွဲခဲ့တဲ့ ရိုးရာ အစားအစာ တစ်ခုပါ. . . . အနီးအနားမှ မြန်မာ၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယားမှသည် တကမ္ဘာလုံးသို့ ပျံ့နှံ့သွားပြီး လက်ဖက်၏ ကောင်းကျိုးများကို ယနေ့ထိတိုင် တစ်ခုပြီး တစ်ခု ဖော်ထုတ်ဆဲ ဖြစ်ပါသည်. . . . ယေဘုယျအားဖြင့် လက်ဖက်စိမ်း (Green Tea) နှင့် လက်ဖက်ညို (Brown Tea) ဟု နှစ်မျိုးခွဲထားသော်လည်း ပင်ရင်းမှာ လက်ဖက်တစ်မျိုးတည်း သာဖြစ်ပါသည်.
လက်ဖက် တစ်မျိုးတည်းအား ပြန်ပြင်ထုတ်လုပ်သည့် အပေါ်မူတည်၍ အမျိုးမျိုးကွဲပြားသွားသလို အာနိသင်လည်း ကွဲပြားသွားပါသည်. ယခု ကျွန်မတို့သောက်တဲ့ ရေနွေးကြမ်းသည် လက်ဖက်စိမ်းဖြစ်ပါတယ်. . . . အစိမ်းရောင် မဖြစ်ပဲ ၀ါဖန့်ဖန့် ဖြစ်နေခြင်းက တာရှည် အထားခံအောင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ပါ. . . . . လက်ဖက်ညို ကတော့ ကျွန်မတို့ အခုသောက်နေတဲ့ လက်ဖက်ရည်အချိုပါ တကယ်တော့ လက်ဖက်ညိုကို သကြား၊ နို့ဆီများနှင့်ရောနှောတဲ့ အချိုးပေါ် မူတည်ပြီး ချိုဆိမ့်၊ ပေ့ါကျ ၊ ချိုပျစ် ၊ ပုံမှတ် တို့ ဖြစ်လာပြီး ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်. . .
တကယ်တေ့ာ ရေနွေးကြမ်းမှာ သာ ကာတီချင် (Catechins)ဆိုတဲ့ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်များတာပါ. . လက်ဖက်ရည် အချိုမှာတော့ အဲဒီကာတီချင်ဓာတ် အရမ်းနည်းပါတယ်. . . . ဒါပေမယ့် ကဖင်း Caffeine ဓာတ်ကတော့ လက်ဖက်ရည် အချိုမှာ များများပါပြီး ရေနွေးကြမ်းမှာ နည်းနည်းပဲ ပါပါတယ်. . . ဒါကြောင့် လက်ဖက်ရည် အချိုက သောက်ချင်စိတ်စွဲစေပြီး ရေနွေးကြမ်းက သိပ်မစွဲတာပါ. . . . .
အထွေထွေကျန်းမာရေးအတွက် ရေနွေးကြမ်းရဲ့ ကောင်းကျိုးပြုမူများသည် စာဖွဲ့လျှင် ကုန်နိုင်စရာမရှိပါ. ကောင်းကျိုးတွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခု တွေ့ရှိလေ့လာနေဆဲပါ. . . အဓိကအကြောင်းကတော့ အင်တီ အောက်ဆီးဒင့် အကောင်းစားဖြစ်တဲ့ ကာတီချင် (Catechins) ကြောင့်ပါ။
ကင်ဆာဖြစ်ပွားနှုန်းကိုလျော့ပါးစေပါတယ်။အဆစ်အမျက်ကိုက်ခဲရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာ စေတယ်။ သွေးထဲက ကိုလက်စထရော အဆီတွေကျစေတယ်။ နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို ကာကွယ်တယ်။ ကိုယ်ခံအား ကို ကောင်းစေတယ်။ ဘော်ဒီဝိတ်လည်း ကျစေတယ်။ သွားပိုးစားတာလည်းကာကွယ်တယ်။ အသက်ကြီးသူ တွေမှာကြုံတတ်တဲ့ အယ်လ်ဇိုင်းမားဆိုတဲ့ စိတ်ကစဉ့်ကလျား ရောဂါကိုလည်း လျော့ကျစေတယ်။
မကောင်းတာလေးတစ်ခုကတော့ ရေနွေးကြမ်းမှာ ကဖင်းဓာတ်အနည်းငယ်ပါတော့ အိပ်မပျော်တာမျိူး ကြုံရတတ်တာလေးပါ။ ထို့ကြောင့် ညအိပ်ခါနီး ရေနွေးကြမ်းသိပ် မသောက်သင့်ပါ. . .
ဒေါက်တာကျော်ကျော် ( အထူးအရေပြားအထူးကု)
ရေးသားသူ poemflower at Sunday, October 09, 20114comments:
ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး - ပုသိမ်မြို့
ဆွမ်းကွမ်း-ဆေးဝါး-ဝေယျာဝစ္စနှင့် သံဃာဆောင်ကြီး မွမ်းမံရန်
ပုသိမ်မြို့၊တိုင်းသံဃဆေးရုံ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ဂိလာနသံဃာတော်များရောဂါဘယမှ ပျောက်ကင်းချမ်းသာကြ၍ သာသနာပြုတော်မူနိုင်ကြပါစေခြင်း ငှာ အောက်ပါအတိုင်း လစဉ် အာစိဏ္ဍကံ သံဃိကဒါန၊ ဇီဝိတဒါန ဘေသဇ္ဖဒါန ထာဝရကုသိုလ်ပြုတော်မှုကြပါရန် နိဗ္ဗာန်အကျိုးမျှော်၍ နှိုးဆော် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
၁။ လစဉ် အာစိဏ္ဍကံ (အနည်းဆုံး) = ၅၀၀၀ိ/- ကျပ်
၂။ အထူးကုသိုလ်ပြုအလှူတော် = ၁၀၀၀၀ိ/- ကျပ်
၃။ ဆွမ်းကွမ်းအလှူတော် = ၁၀၀၀၀ိ/- ကျပ်
၄။ ဆေးဝါးအလှူတော် = ၁၀၀၀၀ိ/- ကျပ်
၅။ သံဃာဆောင် ပြုပြင်မွမ်းမံမှု = ၁၅၀၀၀ိ/- ကျပ်
၆။ ဝေယျာဝစ္စနှင့် ဈာပနအလှူ = ၁၅၀၀၀ိ/- ကျပ်
၇။ လိုအပ်ရာ ဖြည့်စွက်ပါ = ၅၀၀၀ိ/- ကျပ်
အလှူခံဌာန - မြို့မ ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တကောဝိဒ (အဂ္ဂမဟာမင်္ဂလဓမ္မဇောတိက) (မဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ)
မြို့မဓမ္မရိပ်သာ ကျောင်းတိုက် ၊ ရှင်ပင်ဘုန်းပွင့်လမ်း၊ ပုသိမ်မြို့။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။
ဖုန်း - ၀၄၂-၂၅၂၉၄၊ ၀၉- ၅၂၀၂၃၄၇
ရေးသားသူ may16 at Friday, October 07, 2011 1 comment:
ယခုတစ်ပတ်တွင် အဆစ်အမြစ် ကိုက်ခဲခြင်း၊ ဒူးနာခြင်းတို့ကို သက်သာ ပျောက်ကင်းစေသည့် ကျီးကန်းလမ်းလျှောက် သည့် ပုံစံ ယောဂ ကျင့်စဉ်ကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်. .
၁။ ဒူးခေါင်းကွေး၍ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပါ ။ ခြေနှစ်ဖက်ကို ပူးကပ်ထားပါ. . လက်နှစ်ဖက်က ဒူးခေါင်း ၂ ဖက်ကို ပိုက်ထားပါ (ပုံ-၁)
၂။ အသက်ရှုသွင်းပြီး ညာခြေကို ရှေ့သို့ တစ်လှမ်းလှမ်းပါ။ ဘယ်ဘက်ဒူးခေါင်းက အောက်သို့ နှိမ့်ထားရမည်။ အသက်ရှုထုတ်လိုက်ပါ။ (ပုံ-၂)
၃။ တစ်ဖန် အသက်ရှုသွင်းပြီး ဘယ်ခြေကို ရှေ့သို့ တစ်လှမ်းလှမ်းလိုက်ပါ။ ညာဘက် ဒူးခေါင်းကို အောက်သို့ နှိမ့်ထားပါ။ အသက်ရှုထုတ်လိုက်ပါ (ပုံ-၃)
၄။ အသက်ရှုသွင်းပြိး နောက်ဘက်တွင် ကျန်နေသော ညာခြေထောက်ကို ရှေ့ဘက်သို့ ပြန်ယူပြီး စုလိုက်ပါ။ အသက်ရှုထုတ်လိုက်ပါ။
၅။ အဆင့်(၁)မှ အဆင့် (၄) အထိ ကို ၁ ကြိမ်ဟု သတ်မှတ်ပြီး ၃ ကြိမ်အထိ ပြုလုပ်ပါ။
ရှေ့သို့ ခြေလှမ်းလှမ်းချိန်တွင် မလောပါနှင့်။ တဖြည်းဖြည်းချင်း ပြုလုပ်ပါ။
ခြေလှမ်းကို မကျဲစေပါနှင့်။ ခြေလှမ်းစိတ်ရမည်။
ဤလေ့ကျင့်ခန်းကို မှန်မှန်ပြုလုပ်ပေးပါက. . .
ခြေချောင်း၊ ခြေဖျား၊ ခြေဖနောင့် ခြေချင်းဝတ်နှင့် ဒူးခေါင်းကို သန်မာစေပါသည်
ရေးသားသူ may16 at Wednesday, October 05, 20114comments:
မြန်မာတွေဟာ ကမ္ဘာမှာ အချမ်းသာဆုံး ဖြစ်သင့်တယ်. . .ဒ...